> Resource> iPhone> AVI Player maka iPhone: Olee otú Play AVI on iPhone
Ị na-achọ a dị ike AVI ọkpụkpọ maka iPhone ka ị na-egwu AVI on iPhone seamlessly? Mgbe ị na-agbalị ime ya, ị ga-ahụ iPhone bụ ọbụna na-enweghị ike na-aghọta gị AVI faịlụ. Dị ka ya ụdịdị, iPhone akwado AVI faịlụ na ndị na-esonụ nkọwapụta:
AVI bụ a media akpa usoro. The video na ọdịyo iyi n'ime na-echekwara na ụzọ dị iche iche. Motion JPEG bụ nnọọ otu n'ime ha. Kasị AVI faịlụ na ahịa ugbu a na-adịghị na koodu na Motion JPEG. Ya mere, na-egwu AVI faịlụ na iPhone, eleghị anya ị mkpa iji dozie a incompatibility nke mbụ. N'ihi nke a, Wondershare Video Ntụgharị (Video Ntụgharị maka Mac) bụ a aka nke ukwuu. Na ya, ị nwere ike igwu ọ bụla AVI faịlụ na iPhone nke ụdị ọ bụla na elu mma.
Ọzọ, m ga-egosi gị otú ị na-egwu AVI on iPhone ọma nzọụkwụ site nzọụkwụ.
1 Ibu Ibu AVI faịlụ
Mgbe echichi, i kwesịrị iji bido ngwa a na mgbe mbubata AVI faịlụ iji tọghata. Ime ya, ị ma pịa "Tinye Files" button na n'elu aka ekpe ebiet a ngwa si interface na-agagharị na kọmputa gị na họrọ faịlụ ịchọrọ ịgbakwunye, ma ọ bụ na-emeghe nchekwa ebe gị faịlụ-echekwara na kọmputa na mgbe ahụ ịdọrọ AVI faịlụ i chọrọ ngwa a.
2 Họrọ iPhone mmepụta format
A nzọụkwụ, i kwesịrị ịhọrọ iPhone dị ka mmepụta usoro. Akpa-emeghe ya mmepụta format ndepụta site na ịpị Ọkpụkpọ oyiyi na mmepụta Format panel, na mgbe ahụ na-aga "Ngwaọrụ"> "Apple". Ebe a, fọrọ nke nta niile iPhone ụdị na-gụnyere. Dị nnọọ họrọ otu dị ka ngwaọrụ gị.
3 Malite AVI ka iPhone akakabarede
Dị nnọọ amalite AVI ka iPhone akakabarede site na ịpị "tọghata" button na ala n'aka nri akuku nke a AVI ka iPhone Ntụgharị. Akakabarede-agba bụ ultrafast. A nkeji ole na ole mgbe e mesịrị, ọ ga-enyere gị aka rụchaa niile nke ndị a aga-eme.
Cheta na: Ị nwere ike ngwa ngwa emeghe mmepụta nchekwa site na ịpị "Open nchekwa" button na ala nke ngwa a. Ọzọkwa, ị pụrụ ịgbanwe ya ebe a.
4 Nyefee converted faịlụ ka iPhone maka playback
Chọta mmepụta faịlụ dị ka ya faịlụ kwachie, na mgbe mbubata ha ka ha iTunes. Mgbe ọ mere, ị pụrụ ịnọgide na-mmekọrịta ndị a faịlụ gị iPhone maka playback. Ọ gwụla.